Optical Connector ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | တရုတ် Optical Connector စက်ရုံ
Standard 0.9mm 2.0mm 3.0mm ST APC UPC Fiber Optic Connector
Fiber optic connector တွင်လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရရှိရန် adapter သို့ ၀ င်သော screw thread တစ်ခုပါရှိသည်။ connector တွင်နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်နှင့်ကြွေထည် / နွေ ဦး / ကတ္တီပါစည်များအပြင် crimp-over လက်နှင့်ရာဘာဖိနပ်တို့ပါဝင်သည်။ Fiber optic connector (သို့) optical fiber connector သည် fiber optic cable ရဲ့အဆုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး fiber splicing ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သော connection နှင့် disconnection ကိုဖြစ်စေတယ်။ ၎င်းသည်နည်းစနစ်အရအမျှင်များကိုအဆက်အစပ်ဖြစ်စေရန်နှင့်အလင်းရောင်ရရှိစေရန်အတွက်ဖိုင်ဘာအရင်းမြစ်များကို align လုပ်သည်။
1.Good ပြန်လုပ်ခြင်းနှင့်လဲလှယ်နိုင်ခြင်း။ 2.Good အပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှု။ ၃။ အရည်အသွေးမြင့်သောကြွေထုပ်ပစ္စည်းများသည်သွင်းခြင်းဆုံးရှုံးမှုနည်းသည်။ 4. မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆုံးရှုံးမှုအရွယ်အစားတိကျ။ လျှောက်လွှာ 1.Patch ပြား။ 2.Distribution ဘောင်။ ဖိုင်ဘာကွန်ယက်များအားထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့) အရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း။ 4. FTTH ဆိုင်များတွင်အစာရှောင်ခြင်း connector ကို။ LAN ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်စားပွဲခုံတွင်ချိတ်ဆက်ခြင်း။ စစ်ဆင်ရေး Tool ကို 1. ဖုံးလွှမ်းဝါယာကြိုးချွတ် Clamp 2.Wire Stripper 3.Length Fixed တူရိယာ 4.Optical ဖိုင်ဘာဖြတ်တောက်ခြင်းတပ်ဆင် ...
စံ 0.9mm 2.0mm 3.0mm LC APC UPC Fiber Optic Connector
စံ 0.9mm 2.0mm 3.0mm FC APC UPC Fiber Optic Connector